प्रस्तावित गुठी ऐन किन जनविरोधी र देशघाती छ ? « Drishti News
९) यो प्रस्तावित गुठी ऐन संविधानको धारा २९० विपरित पनि छ । त्यसमा “गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी…. संसदले कानून वनाउनेछ” भनिएको छ । गुठीको मूलभूत मान्यता विपरित स्थानिय समूदायको सामूहिक स्वामित्वमा रहेको गुठी संस्कृति नष्ट गर्न र सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य सहित यो प्रस्तावित गुठी ऐन ल्याइएको छ ।
यस्ताे विधेयक सरकारले तुरून्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।